China Premix Glass Beads BS6088A fanamboarana sy orinasa | olan
Ny fanamarihana ny arabe dia iray amin'ireo fitaovana mahomby sy mahomby indrindra hitarihana tsara ny fifamoivoizana. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny lampivato sy ny pigmentation ny fanamarihana fitaovana dia manome fahitana mazava ny striping eo ambanin'ny toe-javatra mazava ny andro.
Rehefa manambatra vakana fitaratra misy kalitao optika tsara izy ireo, dia manjary miharihary mazava amin'ny alina ny marika amin'ny lalana. Ny vakana fitaratra dia ampiharina amin'ny fitaovana fanamarihana lampivana amin'ny iray amin'ireo fomba telo. Izy ireo dia azo alefa premixed amin'ny fanamarihana fitaovana alohan'ny fampiharana, na izy ireo dia afaka naidina na hafafiny amin'ny loko mando ao ambadiky ny sprayer loko, na ny ampahany azo atsofoka amin'ny premixed roa epoxy na thermoplastic fitaovana. Ny tampon'ny vakana dia rakotry ny loko, miaraka amin'ny fihetsika mihoampampana avy amin'ny loko miakatra hatrany ambonin'ny afovoan'ny vakana. Manome hetsika roa izany. Izy io dia manidy ny vakana fitaratra ao anaty loko ary mamela ny loko hihetsika ho toy ny velaran-taratra miparitaka amin'ny retroreflection, miaraka amin'ny lokon'ny loko misy ny lokon'ny hazavana naverina naverina. Ny jiro miditra amin'ny vakana fitaratra dia miondrika ary mifantoka mankany ambadiky ny vakana ary taratra indray mankany amin'ny jiro sy ny mpamily.
Previous: Mitete amin'ny vakana fitaratra EN1423